Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mitaky 9% ny entana entana amin'ny habakabaka amin'ny volana Febroary raha oharina amin'ny ambaratonga mialoha ny COVID
Ny faritra rehetra afa-tsy ny any Amerika Latina dia nahita fanatsarana ny tinady entana raha oharina amin'ny ambaratonga talohan'ny COVID ary Amerika Avaratra sy Afrika no mpanao matanjaka indrindra
Ny fangatahana entam-barotra amin'ny habakabaka dia mitohy mihoatra ny haavon'ny pre-COVID
Ny volana izao dia niverina tamin'ny ambaratonga 2018 hita talohan'ny ady varotra amerikana sy sinoa
Ny fangatahana eran-tany, refesina amin'ny kilaometatra entin'ny entam-be (CTKs *), dia tafakatra 9% raha oharina tamin'ny Febroary 2019
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) Navoaka ny angon-drakitra 2021 tamin'ny volana marsa ho an'ny tsena fitaterana an-habakabaka manerantany izay mampiseho fa ny fangatahan'ny entana an-habakabaka dia nitohy nihoatra ny haavon'ny pre-COVID niaraka tamin'ny fangatahana izay nitombo 9% ny volana febroary 2019. Ny fangatahana tamin'ny volana febroary dia nampiseho fitomboana isam-bolana mahery tamin'ny haavon'ny volana janoary 2021 Ny volana izao dia niverina tamin'ny ambaratonga 2018 hita talohan'ny ady varotra amerikana sy sinoa.
Satria ny fampitahana eo anelanelan'ny valiny 2021 sy 2020 isam-bolana dia voarebirebin'ny fiatraikan'ny COVID-19 tsy manam-paharoa, raha tsy misy fanamarihana hafa fa ny fampitahana rehetra hanaraka dia hatramin'ny Febroary 2019 izay manaraka ny lamina fangatahana mahazatra.
Ny fangatahana eran-tany, refesina amin'ny kilaometatra entin'ny entam-barotra (CTKs *), dia nitombo 9% raha oharina tamin'ny febroary 2019 sy + 1.5% raha oharina tamin'ny Janoary 2021. Ny faritra rehetra afa-tsy ny Amerika Latina dia nahita fanatsarana ny fangatahana entana an-habakabaka raha oharina amin'ny ambaratonga mialoha ny COVID ary Amerika Avaratra sy Afrika no mpilalao matanjaka indrindra.
Ny famerenana amin'ny laoniny ny fahaiza-manao manerantany, refesina amin'ny kilometatra kilometatra misy entana (ACTK), dia nijanona noho ny fahatapahan'ny fahafaha-miasa vaovao teo amin'ny lafiny mpandeha satria nanamafy ny fameperana ny dia ny governemanta noho ny fiakaran'ny tranga COVID-19 farany teo. Nihena 14.9% ny fahafaha-mihena raha oharina amin'ny Febroary 2019.
Ny fepetra miasa dia mijanona ho mpanohana ny entan'ny rivotra:
Ny fepetra eo amin'ny sehatry ny famokarana dia matanjaka na eo aza ny fiakaran'ny tsimok'aretina COVID-19 farany teo. Ny Index global Purchasing Managers 'Index (PMI) manerantany dia tamin'ny 53.9 tamin'ny volana feb. Ny valiny mihoatra ny 50 dia manondro ny fitomboan'ny famokarana raha oharina amin'ny volana teo aloha.
Ny singa fandefasana entana vaovao amin'ny PMI fanamboarana - mari-pamantarana lehibe indrindra amin'ny fangatahana entam-barotra– dia nalaina raha oharina tamin'ny Janoary.